Mai Chibwe VekwaZimuto: Kugeza chitubu.
Kugeza nhengo yemukadzi/ kugeza pamberi
Pamaburi ese ari pamunhu chero ari murume kana mukadzi, muromo chete ndiwo unogezwa mukati. Pakugeza mazino. Zvimwe zvese hazvigezwi mukati. Chitubu chinongogezwa kunze nenyama dzakatenderedza dzakaita sematinji nepese panomera vhudzi. Pane kuno kumusoro kwakavanda bhinzi. Ukabhenengura ipapo unokwanisa kuona bhinzi yako inogara yakafukidzwa. Mayakafukidzwa imomo munokwanisa kuita gweme sezvinoita varume vasina kuchekwa ganda kana vava nenguva vasina kugeza pasi peganda. Gweme iri rinowanda kana uchigaroita zemo asi usina anokurhoja uye usingapagezi zvakanaka panhu apa. Ukaita zemo pabhinzi panosinira kana bhinzi yamira nezemo. Zvadaro zemo rikapera kusinira kuya kunopera kozoita gweme. Gweme rakaitigwa kuti bhinzi igare yakaurungana uye isinganetswi neFRICTION. Tingati gweme mafuta, asi rikagarisa rinoita munhuwi.
Pakatenderedza bhinzi panoda kugezwa nesipo chete, zvikuru kana une murume anogaropasveta kana kupakisa kana kunazva bhinzi yako, zvinova zvinonaka kupfuura kupinzwa chombo muchitubu. Gara pakagezwa kukurudzira murume kushamwaridzana nebhinzi yako.
Kana wada kupageza ita zvokupopomesa sipo ipapo wombomira yoshanda wozogeza. Kana pari kubuda munhuwi usiriwo unokwanisa kupageza ne vinegar kuti zvipukanana zvinuitisa munhuwi uyu zvife. Unopanyorovesa ne vinegar wombogara hako kwekanguva kuda maminitsi 20 wozondogeza nesipo. Wodarozve kwemazuva matatu. Unozopedza mwedzi yakati kuti pasingabudi munhuwi iwoyo.
Muchitubu chaimo hamuiswi chinhu. Hamunhuwi kana musina chigwere. Mukati macho mune inohi PH Balance inofanira kugara yakanaka. Dzimwe nguva unohwa munhuwi wakaita sewehove. Izvi zvinoitiswa nokuti BALANCE yako inenge yabva painofanira kunge iri. Zvimwe zvipukanana zvisingafaniri kuwandamo zvowanda. Unoona posiririka zvimvura zvichena, zvikuru kana murume arimo achikoira asi asati adiridziramo. Pamwe iye anotokuudza kuti paita hove panhu pako.
Munhuwi wehove unoitiswa nezvinhu zvakaita seizvi:
Kuisa mvura mukati mechitubu wobva wageza zvipukanana zvakanaka uchiwedzera zvakaipa.
Kana wenge wakapatsana nomurume ndokuzosangana ndokutanga Rhoji naye
Kana ukarhojana nevarume vaviri kana vakawanda usingashandisi kondomu. Balance yomukati inosiyana nezvayanga iri.
Kana uchangochinja murume kubva pane wawange unaye
Kazhinji panovava zvokuti unotoda kukwenya nguva nenguva. Vamwe vanoti ukaona zvadai imbopazora yogati yakawanda asi usadira mukatikati.
Ukaona pachibuda zvimwe uye pachitonhuwa chaizvo kasira kumhanya kwachiremba nokuti une chigwere.
Chitubu chakagadzirigwa kupinzwa chombo uye kudiridzigwa mukati muchisara makazara urume. Unokwanisa kupiwa urume kakawanda pazuva. Kana mese mukadzi nomurume musina chigwere munhuwi wamunongohwa hauna kushata unotowedzera zemo futi zvokuti munotodazve kurhojana. Toti paya wazadzwa urume mukati iwe wafunga kuti urume itsvina woda kugeza, hapana magezero aungaita mukati mechitubu. Chitubu chine zvimakoronga mukati zvakagadzirigwa kubata urume kuti hugaremo kubatsira kuti ugobata mimba. Murume kana ari mukati achikoira paya unoona kuti paanotanga kudiridzira urume hunobuda huchiti pfaaa, pfaaa, sehuri kubuda mupfuti. Ipapo hunosvikorova madziro hopararira , uku humwe huchibuda futi mumurume, hobva hwazara mumagoronga aya andareva akaitiswa nokuunyana unyana kwenyama dzirimo dzinova ndidzo dzinokwiziwa nechombo kana murume achikoira zvichibva zvanaka. Nyama idzi dzinobatana dzichipatsana dzichibatana pakurhojana kwenyu.
Nokuda kwesimba rourume pakubuda mumurume huchienda mumukadzi makoronga aya anozadzwa urume. Pedzezvo murume wopedza zvaari kuita obudisa chombo kubva mumukadzi. Mativi echutubu osanganazve nokuti chitubu kana chisina chinhu mukati panenge pasina buri, panovhara. Pakuvharika paya urume huri kuno kumuromo hunosvinwa hochururukira pazhe. Uhu ushommanana pane hwasara mukati. Chero ukada kudira mvura chero ukasada, muchitubu mako munenge mune urume kwemazuva matatu zvokuti ukaita zai pedo unoita mimba.
Kana usina kupiwa humwe urume, kukapera mazuva matatu hunofa. Mukati mechitubu munofamba famba nyama dziya dzemakoronga. Kufambafamba uku kunoitika nokuti chitubu chinongogara chichida kupinzwa chombo saka chinombonyorova chombosanyorova chombozvimba chomboserera, Kumusoro kwacho kune kaburi kanova muromo wechibereko. Kaburi aka kanorega madzihwa (mucus) achibuda muchibereko. Madzihwa awa ndiwo anoeredza mukati mechitubu achigeza chitubu iwe muridzi wongozoona kusinira kuno kumuromo. Wogeza nesipo wopukuta, zvatopera.
Kana ukapinzwa chombo nomurume akambobuda ukachitarisa unoona chakatozara zvinhu zvakaita semafuta machena anotsvedza. Ndiwo madzihwa echibereko anogeza chitubu.
Toti wadira mvura mukati mechitubu, wokanganisa BALANCE yako kudai, unokwanisa kubata zvimwe zvigwere futi. Kana ukarhojana nomurume ane HIV unokasira kuibata nokuti dzihwa rinoPUROTEKITA nyama dziya mukati unenge waribvisa uye unokwanisa kunge waitisa zvimaronda zvidikidiki zvinopindwa neutachiona.
Geza pamberi nesipo isina kunyanyosimba zve ACID kana BASE inohi MILD.
Kana uchingorhojana nomunhu umwe chete haatombokubvunzi chinhu. Chitubu chinongopinzwa kana kagumi pazuva pasina kana problem.
Kune zvigwere zvakaita saana CANDIDA. Hazviitiswi nokuti hauna kudira mvura mukati. Zvinoitiswa neutachiona.
Kana uchihura ziva kushandisa makondhomu. Kana wada zvokudiridzigwa mukati chiona kuti umwe chete wevauri kuhura navo ndiye ega anobvumigwa kudiridzira pasina kondhomu.
Chitubu chinozvigezesa nokuda kwemagadzirigwe acho. Musiki akakusika akakuitira kuti ugowana murume anokurhoja madire usingagwariswi nazvo uye usinganhuwi nazvo. Chero ukaita guchu reurume mukati hapana chakamboipa uye hakuna chigwere chinoitika. Unohwa varume vachitoshamisika kuti urume hwese huri kuendepi. Isu hatina basa naizvozvo. tongoda murume avepo achitiwedzera chete. Hakuna munhu akamboenda kuchipatara achiti azadzwa urume nomurume wake.
Usadira mvura mukati mechitubu, kana kuisa chimwe chinhu uchifunga kuti uri kusuka chitubu. Kana une murume, izvozvi pauri kuverenga izvi unotova nourume mukati mechitubu chako. Hausi kugwadziwa kana kukomburena. Hana yakagadzikana. Naponapo ucharhojewa futi nhasi ugowedzegwa urume mukati. Usaita hanya nazvo kubva kare nakare ndiwo maitire evanhu nedzimwe mhuka. Hauna kumboona dhongi kana bhiza rinoti parinokwigwa rinotopiwa chindigwana chizere urume, hauna kumbohwa kuti madhongi anogwara nokuzara urume. Munhu wese ane murume anodanana nomurume wake anotogaroisana nomurume agopiwa urume agogara nahwo mazuva mana.
Kana uri hure, chinokuitisa zvigwere gvata navanhu vane zvigwere usina makondhomu. Kuzara urume mukati hakuna zvigwere kana vanhu vakupa urume vasina zvigwere. Asi kungoti uchazoita CANCER yechibereko nengari yokuvata nevarume vakawanda. Urume hahusi hwekuvhenganisa mukati mako.
Chitubu chinozvisuka chega mukati. Usanyebegwa navamwe vanoda kuti utenge mishonga yavo yokunyeba, unozvikuvadza. Ukabvunza madhokotera anokuudza kuti rega kuisa zvinhu mukati nokuti unozviisa maBacteria asiriwo.
mheche inogezwa sei,
Posted by Mai E Chibwe at 13:17
ko chii chinoita kuti mukadzi aibude mvura yakawanda pakurara nemurume? dambudziko iri ringapedzwa nei?
Harisi dambudziko.Mukadzi anonyorova zasi kuti murume ankwanise kupinda zvisingagwadzi mese. Dambudziko rinotova amukadzi asinganyorovi. anofanira kuonekwa naDoctor nokukasira. Kana usina kuhwisisa ndirumire Email totaure. maichibwe@yahoo.co.uk
bashir ajida said...
Ndino tenda zvikurusa nezvidzidzo zviripano, with gratitude I really appreciate this blog and thumbs up to the administration for such humorous talks.
Mutendi ndini kuhwa kuti nguva yandinonyora inguva inobatsirawo umwe munhu.
8 March 2014 at 05:48
I love this site. Its really helpful. Mai Chibwe my question is saka when we wash the private part I should not insert my finger and wash out the white stuff?
16 June 2015 at 11:25
Zvinobudapo zvinongogezwa nemvura asi usingapinzi chinhu kukati. Zvese zvinobudapo zvinobva kure chose kuchibereko uye zvine basa razvo mukati mako. Ukaita tsika yokupinza hosi paipi uchisuka mukati nemvura unouraya maBhakitiriya anounza utano mukati.
Chokungochenjerera ndechokuti kana ukahwa paita hwema hwakaipa, ziva kuti waita INFECTION. Pamberi pasina INFECTION hapaiti hwema. Hwisisazve kusiyana kwehwema hwe GWEME nehweINFECTION. Kana ukasanyatso geza pane chiganda chakafukidza bhinzi, unoita gweme sezvinoita murume asuna kugeza pasi peganda rechombo. Hwema hwegweme hunozikamwa nawese zvake ava munu mukuru kana kuti ane murume.
Vinegar inouraya maBACTERIA anonhuwisa ganda asi usaisa vinegar mukati chero zvodii.
18 June 2015 at 15:11
Ini ndinoti mazuva akawanda ndinoshandisa Panty Liner because ndinonorova pamberi. Zvinoitiswa nei uye ndingaita sei?
Ukazviongorora uchaona kuti kunyorova uku hakuitiki nguva dzese asi kuti kunotevera nguva dzemwedzi. Usaita hanya nazvo. Ingoramba uchishandisa LINER dzako idzodzo chete. Chitubu chinozvigeza chichibudisa zvachisingadi zviri mukati. Ukuwo ukawanza zemo unonorova. Saka hapana chakaipa.